Add-on Malagasy Bible1.0
Downloads 14 063
Kitapo feno ho an'ny FSX/ SP2 (notsapain'i Rikoooo ary mifanaraka amin'ny Prepar3D v4.5) miaraka amin'ny VC feno, sy ny boom compartment. Tsara kokoa ho an'ny multiplayer amin'ny boom animé, ary ny fijerena ny fakan-tsary momba ny fividianana ariel. Ahitana ny boom manara-penitra, boom miaraka amin'ny fitaovana fitsaboana, ary ny rafitra MPRS amin'ny modelin'i R. Manorata mba hanampiana ny fitaterana fisotroan-drivotra mandalo FSX by Andy Niko sy Jivko Rusev ho an'ny fiaramanidina tianao indrindra.
Ny Boeing KC-135 Stratotanker dia fiaramanidina miaramila mandoza. Izy io no fiaramanidina voalohany mpamatsy fiarandalamby amerikana nisolo ny KC-97 Stratotanker. Toy ny mpiray tam-po aminy, ny Boeing 707, ny KC-135, dia avy amin'ny Boeing 367-80 jet, izay matetika no nantsoina hoe "Dash-80". Tamin'ny voalohany dia noterena hanamboarana bateria matihanina izy ireo saingy nampiasaina betsaka tany amin'ny ady Vietnamiana sy taty aoriana ny fifandonana toy ny Desert Storm mba hanitarana ny dingana sy ny fiaretan'ny tetikady Air Force sy ny mpiady tetikady. Miaraka amin'ny tafika Air Force avy amin'ny United States hatramin'ny 1957 June, Ny farany KC-135 dia natolotra tamin'ny Air Force tao 1965.
Ny KC-135 rehetra dia niasa tamin'ny milina turbojet Pratt & Whitney J-57-P-59W tany am-boalohany. Ao amin'ny 1980s ny programa fanovàna voalohany dia nanamboatra tankeran'ny 157 miaraka amin'ny motora torrentof Pratt & Whitney TF-33-PW-102. Ny mpamatsy fiara novidiana, izay nantsoina hoe KC-135E, dia 14% bebe kokoa ny solika azo antoka noho ny KC-135A. Ny programa fanovàna faharoa dia nanamboatra fiaramanidina 500 miaraka amin'ny CFM56 vaovao. Ny fiara mpamily izay voatendry ho KC-135R (niova KC-135A na E) na KC-135T (niova KC-135Q), dia 25% bebe kokoa ny solika toy ny tamin'ny môtô taloha.
Mpanoratra: Gary D. Shetter III